Etu esi chepụta, dee, ma bipụta akwụkwọ ọgụgụ gị site na iji akwụkwọ Google | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ịga n’okporo ụzọ ede na ibipụta akwụkwọ ntanetị, ịmara na iji ụdị faịlụ EPUB agbasa, ntụgharị, nhazi na nkesa abụghị maka obi obi. Enwere ọtụtụ ọnụọgụ ebook na ntanetị ga - enyere gị aka site na usoro ahụ wee nweta akwụkwọ ntanetị gị na akwụkwọ Google Play, Kindle na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Akwụkwọ ọgụgụ bụ ụzọ dị egwu maka ụlọ ọrụ iji tinye ikike ha na ohere ha yana ụzọ dị mma iji weghara ozi atụmanya site na peeji nke ọdịda. Akwụkwọ ederede na-enye ozi miri emi karịa akwụkwọ ọcha dị mfe ma ọ bụ nyocha nke ozi infographic. Ide ederede ebook na-emepekwa ndị ọhụụ ọhụụ site na ntanetị nkesa eBook nke Google, Amazon na Apple.
Enwere ọtụtụ ndị na-eme mkpebi nọ ebe ahụ na-achọ isiokwu gbasara ụlọ ọrụ gị na ịgụ akwụkwọ ndị metụtara ya. Ndị asọmpi gị ọ adịla ebe ahụ? Enwere ezigbo ohere na ị nwere ike ịchọta niche mara mma na isiokwu ị nwere ike bipụta na ọ nweghị onye ọzọ nwere.
Nke kachasị, ịgaghị akwụ ụgwọ ọrụ ebook, azụmaahịa na ọrụ nkwalite… ị nwere ike mepee ọhụụ ọhụrụ jiri Oghere Google akaụntụ ma malite ịmepụta, dee, na mbupụ faịlụ dị mkpa ịkwesịrị iji bipụta akwụkwọ ntanetị gị na isi mmalite nkesa isi n'ịntanetị.
Nzọụkwụ iji bipụta Ebook gị
Ekwetaghị m na enwere nnukwu ọdịiche na atụmatụ maka ịde ederede ebook dịka akwụkwọ ọ bụla ọzọ… usoro a na-ekwu okwu. Akwụkwọ ndekọ aha nwere ike dị mkpụmkpụ, karịa ezubere iche, ma nye otu ebumnuche karịa akwụkwọ ọgụgụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ. Ga-achọ ilekwasị anya na imewe gị, nhazi nke ọdịnaya gị, yana ike ịkwali onye na-agụ gị ka ị mee ihe na-esote.
Kwadebe akwụkwọ gị - hazie isiokwu ndị dị mkpa na isiokwu dị mfe iji duzie onye na-agụ gị site na ọdịnaya. Onwe m, emere m akwụkwọ a site na ịpụta eserese ọkpụkpụ azụ.
Kwadebe ederede gị - ngalaba na-agbanwe agbanwe, ikwu okwu, na echiche (onye mbụ, nke abụọ, ma ọ bụ nke atọ).
Dee ihe ndeputa gi - hazie oge na ebum n’uche banyere otu ị ga-esi mezue akwụkwọ izizi nke akwụkwọ gị.
Lelee ụtọ asụsụ na mkpoputa gị - tupu ikesa ma ọ bụ bipụta otu ebook, jiri nnukwu nchịkọta akụkọ ma ọ bụ ọrụ dịka Grammarly iji chọpụta ma dozie mmejọ ọ bụla ma ọ bụ ụtọ asụsụ.
Nweta nzaghachi - kesaa ihe ederede gị (yana nkwekọrịta na-agaghị egosi) na akụrụngwa ndị tụkwasịrị obi nwere ike ịnye nzaghachi na akwụkwọ a. Na-ekesa Google Docs zuru okè n'ihi na ndị mmadụ nwere ike itinye ihe ozugbo na interface.
Nyochaa akwụkwọ gị - n'iji nzaghachi, degharịa ihe ederede gị.
Mee ka ihe ị dere dịkwuo mma - ị nwere ike itinye ndụmọdụ, akụrụngwa, ma ọ bụ ọnụọgụgụ na nnomi gị niile?
Chepụta ihe mkpuchi gị - kpoo enyemaka nke nnukwu onye mmebe ihe osise wee mepụta nsụgharị dị iche iche ole na ole. Jụọ netwọk gị nke bụ ihe na-akpali akpali.
Jiri akwụkwọ gị kwụọ ụgwọ - nyocha akwụkwọ ntanetị ndị ọzọ dịka nke gị iji hụ ego ole ha na-ere. Ọbụna ma ọ bụrụ na i chere na nkesa n'efu ga-abụ ụzọ gị ịga - ịre ya nwere ike iweta eziokwu karịa na ya.
Anakọta testimonial - chọta ụfọdụ ndị na-eme ihe ike na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ nwere ike ide ederede maka ebook gị - ikekwe ọbụlagodi site na onye ndu. Akaebe ha ga-agbakwunye ịtụkwasị obi na akwụkwọ ntanetị gị.
Mepụta akaụntụ gị edemede - n'okpuru ị ga-ahụ isi saịtị iji mepụta akaụntụ ndị edemede na ibe profaịlụ na ebe ị nwere ike bulite ebook gị ma ree ya.
Dekọọ mmeghe vidiyo - mepụta mmeghe vidiyo nke na-enye nkọwa nke akwụkwọ ọgụgụ gị na atụmanya maka ndị na-agụ ya.
Zụlite usoro ịzụ ahịa - mata ndị na-eme ihe ike, ndị na-ahụ maka akụkọ, pọdkastị na ndị na-ese vidio ga-achọ ịjụ gị ajụjụ maka ịmatakwu akwụkwọ ọgụgụ gị. I nwedịrị ike ịchọrọ itinye ụfọdụ mgbasa ozi na akwụkwọ ndị ọbịa na mmalite ya.
Họrọ hashtag - mepụta hashtag dị mkpirikpi, na-adọrọ adọrọ maka ịkwalite na ịkekọrịta ozi gbasara akwụkwọ ebook n'afọ.
Họrọ ụbọchị mmeghe - Ọ bụrụ na ịhọrọ ụbọchị mmeghe ma nwee ike ịre ahịa na ụbọchị mmalite ahụ, ị ​​nwere ike nweta akwụkwọ ntanetị gị ruo a mma-ere ọnọdụ maka ya ọgọ na downloads.
Hapụ akwụkwọ ntanetị gị - hapụ ebook ma gaa n'ihu n'ịkwalite akwụkwọ ahụ site na ajụjụ ọnụ, mmelite mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi, okwu, wdg.
Soro ndi obodo gi - kelee ndị na-eso ụzọ gị, ndị mmadụ na-enyocha akwụkwọ gị, ma na-aga n'ihu ikwughachi ma na-akwalite ya ogologo oge i nwere ike!
Pro NDỤMỌDỤ: Fọdụ n'ime ndị edemede dị ịtụnanya m zutere na-enwekarị ihe omume na ndị na-ahazi ogbako na-azụta akwụkwọ nke ndị bịara ha karịa (ma ọ bụ na mgbakwunye) ịkwụ ha ụgwọ ikwu okwu na mmemme ahụ. Nke a bụ nnukwu ụzọ ịbawanye nkesa na ire ahịa ebook gị!
Kedu ihe bụ EPUB File Format?
Otu ihe dị mkpa na nkesa akwụkwọ gị bụ ịmepụta ebook na ikike ibupụ n'ụzọ dị ọcha na usoro ụwa niile nke ụlọ ahịa akwụkwọ n'ịntanetị niile nwere ike iji. EPUB bụ ụkpụrụ a.
Epub bụ usoro XHTML nke na-eji ndọtị faịlụ .epub. EPUB dị mkpụmkpụ maka kọmputa n'akwụkwọ. EPUB na-akwado ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ntanetị, yana ngwanrọ dakọtara dị maka ọtụtụ smartphones, mbadamba, na kọmputa. EPUB bụ ọkọlọtọ nke International Digital Publishing Forum (IDPF) bipụtara na Grouplọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahịa Akwụkwọ na-akwado EPUB 3 dị ka otu nhọrọ ịhọrọ maka nchịkọta ọdịnaya
Mepụta Ebook gị na Google Docs
Ndị ọrụ na-emepe emepe Google Docs na adịghị ahu nagide na-ewu na formatting ike. Ọ bụrụ na ị na-ede ebook, ị ga-.
Chepụta ihe ga-akpali akpali Kpuchie maka ebook gi na ibe ya.
Jiri ihe mbido maka ebook gị na a aha Peeji.
Jiri isi na erskwụ maka ebook aha na nọmba ibe.
Jiri isi 1 element ma dee a nraranye na ibe ya.
Jiri isiokwu 1 element ma dee nke gị ikweta na ibe ya.
Jiri isi 1 element ma dee a n'ihu na ibe ya.
Jiri isiokwu 1 element maka gị isi okwu.
jiri Tebulu ọdịnaya mmewere.
jiri Ihe odide ala mmewere maka zoro aka. Jide n'aka na inwere ikike iji bipụta ọ bụla nkwupute ọ bụla ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ị na-ebipụtaghachi.
Jiri Isi nke 1 were de ihe Banyere chepụtara na ibe ya. Hụ na ị gụnyere utu aha ndị ọzọ ị dere, njikọta mmekọrịta gị na mmadụ, na otu ndị mmadụ nwere ike isi kpọtụrụ gị.
Hụ na ịtinye peeji nke ibe ebe ọ dị mkpa. Mgbe ị nwetara akwụkwọ gị na-ele anya otu ị ga - achọ ya, bipụta ya dị ka PDF izizi iji hụ na ọ dị ka ọ masịrị gị.
Google Docs EPUB Mbupụ
Iji Google Docs, ị nwere ike ugbu a dee, imewe, ma bipụta site na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ederede faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ ozugbo uploaded na Google Drive. Oh - ma ọ bụ n'efu!
Nke a bụ otu esi ebupụ akwụkwọ ntanetị gị site na iji Google Docs
Dee ederede gị - Bubata ederede edere ederede ọ bụla nwere ike ịtụgharị na Google Docs. Enwere ike ide akwụkwọ gị na Google Docs ozugbo, ibubata ma obu mekọrịta Okwu Microsoft akwụkwọ ma ọ bụ jiri isi iyi ọ bụla Google Drive nwere ike ịhazi.
Mbupụ dị ka EPUB - Akwụkwọ Google ugbu a na-enye EPUB dịka ụdị faịlụ mbupụ mbupụ. Naanị họrọ Faịlụ> Budata Dị ka, mgbe ahụ, EPUB Akwukwo (.epub) na ị dị njikere ịga!
Nyochaa EPUB gị - Tupu ị bulite EPUB gị na ọrụ ọ bụla, ị ga - achọ ijide n’aka na edoziri ya nke ọma. Jiri ntanetị Onye nkwado EPUB iji hụ na ị nweghị nsogbu.
Ebee Ka Kwusaanụ EPUB gị
Ugbu a ị nwetala faịlụ EPUB gị, ugbu a ịkwesịrị ibipụta Ebook site na ọtụtụ ọrụ. Ulo elu maka nkpuchi bu:
Mbipụta Kindle Direct - ederede akwukwo na akwukwo ederede n'efu na Kindle Direct Publishing, ma rute nde nde ndị na-agụ akwụkwọ na Amazon.
Akwụkwọ Mgbasa Ozi Apple Book - otu ebe maka akwụkwọ niile ị hụrụ n'anya, na ndị ị na-achọ ịga.
Akwụkwọ Google Play - nke a gbakwunyere n'ime ụlọ ahịa Google Play.
Smashwords - onye na - ekesa akwụkwọ ntanetị nke indie. Anyị na-eme ya ngwa ngwa, n'efu ma dị mfe maka onye edemede ma ọ bụ onye mbipụta ọ bụla, ebe ọ bụla n'ụwa, iji bipụta ma kesaa ebook na ndị na-ere ahịa buru ibu na ọtụtụ puku ụlọ akwụkwọ.
Aga m akwado ịdekọ vidiyo iji webata akwụkwọ gị, setịpụ atụmanya na ọdịnaya ahụ, na ịkwọ ndị mmadụ ibudata ma ọ bụ zụta ebook ahụ. Ọzọkwa, mepụta nnukwu onye edemede bio na ọrụ mbipụta ọ bụla nke na-enye ya ohere.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m maka Oghere Google.
Tags: amazonamazon akwụkwọandroidapụlakwụkwọ apụlebookederedeepubepub akakabaredeepub NtụgharịEpub nyochaobodoGoogle mbanyeAkwụkwọ Google PlayotúBooklọ ahịa iBooksnwuonnwere onweebipụta ebookdeputa ebupnwhtml
onye isi saịtị61
Julaị 24, 2014, elekere 4:24 nke ehihie
Ezigbo Post, Thanx!
Disemba 9, 2015 na 8:17 mgbede
Anyị nwere ike ịme akwụkwọ na google docs?
Dee 10, 2015 na 12: 07 AM
Ekwenyere m na ha bụ otu ugbu a, Maryam!
Nke a pụtara ìhè. Naanị ihe m chọrọ ugbu a.
Akwa. Ọ na-enyere aka nke ukwuu. Daalụ nke ukwuu?
Mee 25, 2021 na 7: 35 PM
Enwere m ibe 300 nwere obere foto na ibe ọ bụla. Nyocha ụlọ mmanya na-ekwu ihe na-erughị 12MB. Doc goggle m ga-adị oke oke. Kedu ka m ga-esi mebie foto. A kpụrụ ha mana foto niile dị..
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ n'ịntanetị maka ịbelata nha onyonyo, mana ha bụ maka nrụpụta dị mma nke ihuenyo… nke bụ 72 dpi na njedebe dị ala. Ngwa ọhụrụ bụ 300+ dpi. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ibipụta ebook gị, mgbe ahụ 300dpi dị mma. M ga-ahụ na m image akụkụ adịghị ibu karịa akwụkwọ size (ya mere, adịghị fanye na shrink ya… resize ya n'èzí gị ebook, wee mado ya n'ebe). Mgbe ahụ mpikota onu onyonyo. Ngwa mkpakọ onyonyo m na-eji bụ Kraken.